ကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျး မိခငျနှငျ့ သန်ဓသေားအပျေါ ကဖိနျးဓါတျရဲ့ သကျရောကျမှုမြား - Chit MayMay
Home Pregnancy Health ကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျး မိခငျနှငျ့ သန်ဓသေားအပျေါ ကဖိနျးဓါတျရဲ့ သကျရောကျမှုမြား
ကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျး မိခငျနှငျ့ သန်ဓသေားအပျေါ ကဖိနျးဓါတျရဲ့ သကျရောကျမှုမြား
ကဖိနျးဓါတျဟာ ကြှနျမတို့လူ့အဖှဲ့အစညျးမှာ တျောတျောလေးစားသုံးလရှေိ့တဲ့ အရာဝတ်တုတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဥပမာ- ကဖိနျးဟာ ကျောဖီမှာလိုပဲ ခြောကလကျ၊ အခြိုရညျမြားနှငျ့ လကျဖကျရညျတှမှော ပါဝငျပါတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျးမှာ ကဖိနျးဓါတျ စားသုံးသငျ့/မသုံးသငျ့ဆိုတာ အငွငျးပှားဖှယျရာ ခေါငျးစဉျတဈခု ဖွဈလာပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ယနေ့ မှာ ဒီပွဿနာကို နကျရှိုငျးစှာ အဖွရှောရငျး ကိုယျဝနျဆောငျစဉျ ကဖိနျးဓါတျ စားသုံးခွငျးကို မြှဝပေေးသှားပါမယျ။
ကဖိနျးဓါတျဆိုတာ ဓါတုဗဒေအားဖွငျ့ methylxanthine အုပျစုကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ အယျကာလိုကျတဈခုဖွဈပါတယျ။ ကြှနျမတို့ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ ကဖိနျးဓါတျဟာ စိတျလှုံ့ဆျောမှု တဈခုအဖွဈ ဦးနှောကျဗဟို အာရုံကွောစနဈမှာ ဆောငျရှကျပါတယျ။
ကဖိနျးဓါတျ ဟာ adenosine receptors တှဖွေဈတဲ့ A1, A2A ရဲ့ ရနျဖကျတှေ ဖွဈပါတယျ။ ဒီ receptors တှကေ neurotransmitters အမြားအပွား ထုတျလှငျ့တာကို ဟနျ့တားဖို့အတှကျ တာဝနျယူရပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကဖိနျးရဲ့ သကျရောကျမှုက ဒီတူညီတဲ့ transmitters တှကေို ထုတျလှတျပေးဖို့ ဖွဈပါတယျ။
ကဖိနျးရဲ့ ဂုဏျသတ်တိတှကေ ဘာတှလေဲ?
ကဖိနျးဓါတျဟာ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ဗဟိုအာရုံကွောစနဈအတှကျ စိတျကိုလှုံဆျောပေးပွီး စိတျတတျကွှစတေဲ့ အရာဝတ်တုဖွဈပါတယျ။ ကဖိနျးဓါတျဟာ တတျကွှအောငျလှုံဆျောပေးတဲ့ ဂုဏျသတ်တိတှရှေိတာကွောငျ့ မူးယဈဆေးတဈခုဆိုလညျး မမှားပါဘူး၊ ကဖိနျးဓါတျဟာ အောကျဖျောပွပါ အပါအဝငျ ကြှနျတျောတို့ခန်ဓာကိုယျပျေါမှာ တခွားသကျရောကျမှုတှေ ရှိပါတယျ။
ကဖိနျးဟာ အငျတီအောကျဆီဒငျ့တဈခုဖွဈပွီး free radicals တှကေို တိုကျခိုကျပေးပါတယျ၊
ဆီးသှားစတေဲ့ ဂုဏျသတ်တိတှေ ရှိပါတယျ။
အသကျရှုလမျးကွောငျးဆိုငျရာ လုပျငနျးဆောငျတာမြားကို ပိုမိုကောငျးမှနျစပေါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျး ကဖိနျးဓါတျရဲ့ ဆိုးကြိုးမြား
ကဖိနျးဓါတျကို မြိုးပှားမှုနှငျ့ ပတျသတျလာတဲ့အခါ ဆေးရှကျကွီးနှငျ့ တခွားမူးယဈဆေးလို အန်တရာယျရှိတဲ့ အခကျြကို ထညျ့သှငျးစဉျးစားခဲ့ပါတယျ။ သို့သျော အသငျ့အတငျ့သောကျသုံးရငျ အန်တရာယျ မရှိပါဘူး။ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျမှာ ကဖိနျးဓါတျကို အလယျအလတျ စားသုံးခွငျးက ဆိုးဝါးတဲ့ သကျရောကျမှုတှကေို မဖွဈပျေါစပေါဘူး။ ကဖိနျးဓါတျ မွငျ့မားမှသာ ကိုယျဝနျပကျြကတြာ၊ သန်ဓသေားကွီးထှားမှု နညျးစနေိုငျပါတယျ။
မိခငျသောကျသုံးတဲ့ ကဖိနျးဓါတျက သန်ဓသေားဆီကို ရောကျရှိတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ အခငျြးထဲကိုရောကျသှားတဲ့ ကဖိနျးဓါတျဟာ ကိုယျဝနျ ၈လရောကျရှိတဲ့အထိ သန်ဓသေားမှာ အသညျးအတှကျ လိုအပျတဲ့ အငျဇိုငျးတှေ ကငျးမဲ့စပေါတယျ။ ကဖိနျးဓါတျရဲ့ ဂုဏျသတ်တိမြားကွောငျ့ သန်ဓသေားဆီ ရောကျရှိတဲ့ သှေးပမာဏကို လြော့နညျးစပေါတယျ။ ကလေးက အာဟာရနညျးနညျးနဲ့ အောကျဆီဂငျြနညျးနညျးပဲ ရရှိပါတော့တယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကဖိနျးဓါတျ မွငျ့မားစှာ စားသုံးခွငျးက သန်ဓသေားဖှံ့ဖွိုးမှုကို ပွောငျးလဲပဈနိုငျပါတယျ။
နောကျတဈခုက ကဖိနျးဓါတျဟာ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျး ကိုယျဝနျပကျြကခြွငျးကို ဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ပထမသုံးလပတျကာလအတှငျးမှာ ဖွဈပါတယျ။ ကဖိနျးဓါတျပိုလြှံမှုက သှေးတိုးရောဂါကိုပါ ဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျးမှာ သှေးတိုးနဲ့ နှလုံးရောဂါကို ထိနျးခြုပျဖို့ အရေးကွီးတာကွောငျ့ ကဖိနျးကို လြှော့သောကျဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဒီလိုမှမဟုတျရငျ မိခငျနှငျ့ ကလေးအတှကျ မလိုလားအပျတဲ့ ဆိုးကြိုးတှေ ဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။
နို့တိုကျနတေဲ့ ကာလအတှငျးမှာလညျး ကဖိနျးဓါတျက မိခငျနို့ကနေ ကလေးဆီကိုး ရောကျနိုငျပါတယျ။ မိခငျနို့ထဲမှာ ကဖိနျးဓါတျမြားပွားခွငျးက ကလေးရဲ့ အိပျစကျမှုအပွောငျးအလဲတှေ ဖွဈစပွေီး စိတျတိုတာတှေ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ အလယျအလတျစားသုံးမယျဆိုရငျ အန်တရာယျ မရှိပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း မိခင်နှင့် သန္ဓေသားအပေါ် ကဖိန်းဓါတ်ရဲ့ သက်ရောက်မှုများ
ကဖိန်းဓါတ်ဟာ ကျွန်မတို့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ တော်တော်လေးစားသုံးလေ့ရှိတဲ့ အရာဝတ္တုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- ကဖိန်းဟာ ကော်ဖီမှာလိုပဲ ချောကလက်၊ အချိုရည်များနှင့် လက်ဖက်ရည်တွေမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်းမှာ ကဖိန်းဓါတ် စားသုံးသင့်/မသုံးသင့်ဆိုတာ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ခေါင်းစဉ်တစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ယနေ့ မှာ ဒီပြဿနာကို နက်ရှိုင်းစွာ အဖြေရှာရင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ကဖိန်းဓါတ် စားသုံးခြင်းကို မျှဝေပေးသွားပါမယ်။
ကဖိန်းဓါတ်ဆိုတာ ဓါတုဗေဒအားဖြင့် methylxanthine အုပ်စုကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အယ်ကာလိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ကဖိန်းဓါတ်ဟာ စိတ်လှုံ့ဆော်မှု တစ်ခုအဖြစ် ဦးနှောက်ဗဟို အာရုံကြောစနစ်မှာ ဆောင်ရွက်ပါတယ်။
ကဖိန်းဓါတ် ဟာ adenosine receptors တွေဖြစ်တဲ့ A1, A2A ရဲ့ ရန်ဖက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ receptors တွေက neurotransmitters အများအပြား ထုတ်လွင့်တာကို ဟန့်တားဖို့အတွက် တာဝန်ယူရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကဖိန်းရဲ့ သက်ရောက်မှုက ဒီတူညီတဲ့ transmitters တွေကို ထုတ်လွှတ်ပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဖိန်းရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေက ဘာတွေလဲ?
ကဖိန်းဓါတ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွက် စိတ်ကိုလှုံဆော်ပေးပြီး စိတ်တတ်ကြွစေတဲ့ အရာဝတ္တုဖြစ်ပါတယ်။ ကဖိန်းဓါတ်ဟာ တတ်ကြွအောင်လှုံဆော်ပေးတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေရှိတာကြောင့် မူးယစ်ဆေးတစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး၊ ကဖိန်းဓါတ်ဟာ အောက်ဖော်ပြပါ အပါအဝင် ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ တခြားသက်ရောက်မှုတွေ ရှိပါတယ်။
ကဖိန်းဟာ အင်တီအောက်ဆီဒင့်တစ်ခုဖြစ်ပြီး free radicals တွေကို တိုက်ခိုက်ပေးပါတယ်၊
ဆီးသွားစေတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေ ရှိပါတယ်။
အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း ကဖိန်းဓါတ်ရဲ့ ဆိုးကျိုးများ
ကဖိန်းဓါတ်ကို မျိုးပွားမှုနှင့် ပတ်သတ်လာတဲ့အခါ ဆေးရွက်ကြီးနှင့် တခြားမူးယစ်ဆေးလို အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် အသင့်အတင့်သောက်သုံးရင် အန္တရာယ် မရှိပါဘူး။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ ကဖိန်းဓါတ်ကို အလယ်အလတ် စားသုံးခြင်းက ဆိုးဝါးတဲ့ သက်ရောက်မှုတွေကို မဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး။ ကဖိန်းဓါတ် မြင့်မားမှသာ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတာ၊ သန္ဓေသားကြီးထွားမှု နည်းစေနိုင်ပါတယ်။
မိခင်သောက်သုံးတဲ့ ကဖိန်းဓါတ်က သန္ဓေသားဆီကို ရောက်ရှိတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အချင်းထဲကိုရောက်သွားတဲ့ ကဖိန်းဓါတ်ဟာ ကိုယ်ဝန် ၈လရောက်ရှိတဲ့အထိ သန္ဓေသားမှာ အသည်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ အင်ဇိုင်းတွေ ကင်းမဲ့စေပါတယ်။ ကဖိန်းဓါတ်ရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် သန္ဓေသားဆီ ရောက်ရှိတဲ့ သွေးပမာဏကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ ကလေးက အာဟာရနည်းနည်းနဲ့ အောက်ဆီဂျင်နည်းနည်းပဲ ရရှိပါတော့တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကဖိန်းဓါတ် မြင့်မားစွာ စားသုံးခြင်းက သန္ဓေသားဖွံ့ဖြိုးမှုကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ကဖိန်းဓါတ်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပထမသုံးလပတ်ကာလအတွင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဖိန်းဓါတ်ပိုလျှံမှုက သွေးတိုးရောဂါကိုပါ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်းမှာ သွေးတိုးနဲ့ နှလုံးရောဂါကို ထိန်းချုပ်ဖို့ အရေးကြီးတာကြောင့် ကဖိန်းကို လျှော့သောက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် မိခင်နှင့် ကလေးအတွက် မလိုလားအပ်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
နို့တိုက်နေတဲ့ ကာလအတွင်းမှာလည်း ကဖိန်းဓါတ်က မိခင်နို့ကနေ ကလေးဆီကိုး ရောက်နိုင်ပါတယ်။ မိခင်နို့ထဲမှာ ကဖိန်းဓါတ်များပြားခြင်းက ကလေးရဲ့ အိပ်စက်မှုအပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်စေပြီး စိတ်တိုတာတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အလယ်အလတ်စားသုံးမယ်ဆိုရင် အန္တရာယ် မရှိပါဘူး။
Previous articleဘဘေီလေးတှကေို အမွဲတမျးပှဖေ့ကျပေးခွငျးက သူတို့ရဲ့ DNA ကိုပိုကောငျးစတေယျလို့ သိပ်ပံပညာရှငျမြားကဆို
Next articleသငျ့ကလေးဟာ ဉာဏျကွီးရှငျ တဈယောကျဖွဈနိုငျကွောငျး သိစမေယျ့ လက်ခဏာ (၁၀)ခကျြ